Gazety maneran-tany - laharana 13 - ny volana martsa
Home » About us » Newsletters » Gazety maneran-tany - laharana 13
Gazety maneran-tany - laharana 13
29 / 12 / 2019 24 / 12 / 2019 ny Antonio Gancedo
Mitohy ny asan'ny Team Team amin'ny World World faha-2 amin'ny kontinanta amerikana. Avy tany El Salvador izy no nankany Honduras, avy tao nankany Cota Rica. Nankany Panama izy avy eo.
Ny sasany amin'ireo hetsika natao tany amin'ireo toerana lavitra ny Ekipa Base no haseho.
Raha ny momba ny volana martsa eo amoron'ny ranomasina dia ho hitantsika fa nanao ireo fizarana farany izy.
Nanatrika hetsika tao amin'ny Oniversite niaraka tamin'ny mpianatra marobe ny mpikatroka 2 World March (2MM).
Hetsika notanterahin'ny ekipan'ny World March Base any Honduras.
Ny 25 / 11, Andro iraisam-pirenena ho an'ny famongorana ny herisetra amin'ny vehivavy, ireo mpikatroka tamin'ny volana martsa dia mandray anjara amin'ny fihetsiketsehana ao San José sy Santa Cruz, Costa Rica.
Ny ekipa base dia any Panama. Nanao hetsika samihafa izy: tao amin'ny Museum of the Freedom, nitafatafa tamin'ny haino aman-jery, tao amin'ny Soka Gakkai International Panama Association (SGI).
Honduras: Oniversite sy ny media
Fihetsiketsehana fanoherana herisetra ara-nofo
Ny ekipa fototry ny volana martsa tany Panama
Nitohy ny volana martsa ho an'ny Mediteraneana, tonga tao Palermo ary nifarana tao Livorno, avy ao ny toerana niorenan'ny Bamboo ho an'ny toerany ao amin'ny nosy Elba.
Tany Palermo, teo anelanelan'ny Novambra 16 sy 18 dia nahazo sy raisina am-pifaliana tamina fikambanana maro izahay ary nandray anjara tamin'ny fivoriana filankevitry ny fandriampahalemana.
Eo anelanelan'ny 19 sy ny 26 Novambra dia mamarana ny dingana farany amin'ny dia izahay. Tonga tany Livorno sy ny lalan'ny Bamboo izahay hametraka ny toby misy azy ao amin'ny nosy Elba.
Ny takelaka 16-18 Novambra
Logbook 19-26 Novambra
Ary nitombo hatrany ny hetsika tany amin'ny firenena maro.
Ny sekoly ao amin'ny A Coruña dia hankalaza ny ampitson'io sekoly ho an'ny Fandriampahalemana sy Nonviolence (30 / 01 / 20) manao marika olombelona miaraka amin'ny mariky fandriampahalemana na tandindon'ny Nonviolence miaraka amin'ireo mpianatra.
Tamin'ity 17 novambra ity, tao anatin'ny tontolon'ny volana martsa faha-2, dia nisy diabe avy tao amin'ny fonjan'i El Dueso ka hatrany amin'ny masin'ny toeram-pitsaboana Fampisehoana.
Mandritra ny fotoana iraisam-pirenena momba ny lahy sy ny vavy momba ny lahy sy ny vavy dia atao ny hetsika firaisankina miaraka amin'ny latabatra boribory marobe momba an'io lohahevitra io, famerenam-bolo ary fiangonan'ny Jam amin'ny 23 Novambra tao A Coruña.
Sarin'ireo mpianatra A Coruña
Hetsika ny martsa tao Santoña, Santander
Coruña manohitra ny herisetra amin'ny lahy sy ny vavy
Tany amin'ny tanànan'i Córdoba, Arzantina, dia nisy ny fidirana an-tsehatra ho fanelanelanana tamin'ny alàlan'ny teny filamatra hoe "Sekolin-tsika amerikanina ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandriampahalemana"
Nasain'ny Fikambanana Plana Lledò mponin'i Mollet del Vallès ny 2 martsa maneran-tany.
Tamin'ny 21 Novambra dia nisy ny andiany faha-9 tamin'ny fampitana ny hajia “Arma tsy kilalao” tao Londrina, Brezila.
Efa antomotra ny andro hahatongavan'ny Base Team any Brezila; Tsy nijanona ny hetsika. Nisy ny fanentanana famatsiam-bola ho an'ny horonantsary.
Córdoba: Sekoly ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandeferana
Fanolorana ny volana martsa ao Mollet del Vallès
Andiany 9N ny fitaovam-piadiana dia tsy kilalao
Hetsika ao amin'ny Cotia sy ny fampielezana ara-bola
Tamin'ity volana Novambra ity, 24 avy any 2019, tanànan'i Valinhos, Brezila, dia namakivaky tontolo iray tsy nisy ady ary tsy nisy herisetra.
Androany, tao amin'ny Casar ny andro fanoherana ny fanararaotana dia natao tamin'ny fanatanterahana ny fatoran'ny zanak'olombelona sy ny fanendrena ny Monolith.
Ny ekipa fampielezan-kevitra any Karaiba dia nifandray tsy tapaka tamin'ny fanjakana rehetra tao amin'ny faritra ary nanampy azy ireo tamin'ny fizotrany fampitahana.
Cinema-Forum momba ny herisetra macho
Valinhos dia nandeha namakivaky an'izao tontolo izao nefa tsy nisy ady
Manambady manohitra ny herisetra amin'ny lahy sy ny vavy
Ny Antigua sy i Barbuda dia nankatoa ny TPAN
Hetsika tsy misy herisetra ao Shily
Gazety maneran-tany - laharana 14